Munaasabad ay Soo Agaasimeen Ururka Dhalinyarada Sedyo-Sweden oo Ka Dhacday göteborg - Cakaara News
Munaasabad ay Soo Agaasimeen Ururka Dhalinyarada Sedyo-Sweden oo Ka Dhacday göteborg
Waxaa maalinimadii ay taarikhdu ahayd 7/12/2013 laguqabtaya caasimada labad ee Sweden Magaalada göteborg lagu qabtay xaflad loogu dabaldagay xuska Maalinta qowmiyadaha ee hidhar 29 oo ah markii ugu horaysay lagu qabto Caasimada deegaanka Soomaalida Itoobiya Magaalada Jigjiga.
xafaldan oo ay soo agaasimeen ururka dhalinyarta Sedyo-Sweden ayaa waxaa qudbado qiimo leh ka soo jeediyay gudoomiyaha guud ee ururka dhalinyarta Sedyo Sweden mudane maxamed xasan (huways) waxaa kale Isna ka hadlay gudoomiyeyaha qaybta degmada göteborg mudane axmed Aadan iyagoona ka Faalooday Ahmiyada Balaadhan,Qiimaha iyo qadarinta ay Mudan tahay Maalintani oo walaalaysay Dhamaanba Qowmiyadaha iyo Shucuubta Itoobiya kana Qaaday Heeryadii iyo Dibindaabyadii Taliskii Mingistu.
sidaas silamida waxaa iyaguna ka hadlay gudoomiyaha gobolka seydosweden mudane Cabdi Jes madaxa xidhiidhka Guud ururka mudane Cabdi Casiis Abuukar. Dhanka kale Waxgaradka iyo Odoyaaldhaqameed ay ka mid ahaayeen Mudane maxamed Muuse,Mudane Bashiir abshir Gaas.
Waxa barnaamijka daa dihinayay mudane maxamed Haybe oo ahaa xidhiidhiyaha Xafladan Ayaa ahayd mid loo dagaal dagayay maalintan xuska mudan By sedyosweden